SHANU Steel (TIANJIN) Tech CO., LTD iri muna Daqiuzhuang, Tianjin, inova guru welded nenyere kugadzirwa chawo ari world.After makore basa rakaoma, hatina vakaumba-siyana mubhizimisi mufananidzo kukura, uye zviri maererano zvinodiwa maindasitiri matsva, isu takasiya zvizere kutamba yavo zvakanakira kuti vabudirire pakafunuka, mamiriro, unhu uye kushanda zvakanaka kunopindirana kukwidziridzwa.
Takaita mari vamwe simbi nenyere vanogadzira okurima girinihausi factory.We vari nyanzvi kutengesa kwakakurudzira simbi mutopota, inopisa anokungurutsirwa simbi mutopota, greenhoues uye makore saka on.After wandei kukura, Takaita bulid kwenguva yakareba
pamwe makasitoma kubva kunyika dzinopfuura 70 munyika, kufanana Canada, Australia, Singapore, Thailand, Korea, Vietnam, Mexico, Chile, Peru, New Zealand uye zvichingodaro. The goho wegore iri matani mamiriyoni 0,70.
Tinorupa mumwe-vanorega zvokutengeserana mabasa, kusanganisira: design, mashoko, kuongorora, chiputiriso, kukurukura uye kugadzwa kuti zvinodiwa makasitoma edu.
Tine yakanaka ruzivo vazhinji staffs.Our hwokugadzira chikwata rinobatanidza michina yemhando yepamusoro kupa gwaro mazano uye vakarongeka chirongwa solutions.And dzedu dzomunyika rokutengesa nemidonzvo anogona kugadzirisa mubvunzo wako nenyanzvi knowledge.Our vatengi vachagara kuremekedzwa sezvo isu kuzadzikisa zvose chinhu kwenyu nomumwe zvinodiwa.
boka redu nguva dzose achingoramba kupona kubudikidza yepamusoro uye nguva akaita utsanzi mu Kutarisira zvinhu, uye isu makasimbisa kuridzwa musayenzi utariri uye unhu vimbiso system.And chinangwa yedu zvinhu zvakanakisisa dzesangano Visualization kuti mutengi ne "Best Price, Hunogutsa Quality, Fast Delivery, Professional Service "
Tinovimba muchava ne mabasa enyu kuti kuvimba nesu uye tinogona kuvaka yechigarire ukama refu together.FIVE Steel (TIANJIN) Tech CO., LTD ndomumwe enyu zvikuru kuvimba nokutengesa mu China!